Myanmar Defence Weapons: September 2010
Posted by MM at 3:25 AM4comments:
Posted by MM at 2:34 AM No comments:
Posted by MM at 1:47 AM No comments:
မြန်မာ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးလက်နက် ZPU-4 ၁၄.၅မမ ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်း တစ်နေရာပါ။
Posted by MM at 11:52 PM No comments:
Posted by MM at 12:39 AM No comments:
မြန်မာအမြောက်တပ် Nora B-52 Self-propelled Howitzer
ဒီကနေ.တော့ မြန်မာတပ်မတော် အမြောက်တပ်ရဲ. အလိုလျောက်ချိန်ရွယ်ပစ်ခတ်အမြောက် စနစ် ဖြစ်တဲ. Nora B-52 အကြောင်းပေါ.။Nora B-52 ကို ဆားဘီးယားနိုင်ငံမှ ၂၀၀၃ခုနှစ်မှ စတင်စမ်းသပ်ခဲ.ပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှ စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။Yugoimport SDPR မှ ပုံစံထုတ် ထုတ်လုပ်ခဲ.ပါတယ်။၁၅၂မမ အမြောက်ဖြစ်တဲ. M-84 NORA-A ကို KamAZ 63501(သို.မဟုတ်) FAP-2882 8ဘီးတပ်ယာဉ်ပေါ်မှာ တပ်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး တာဝေးပစ်ခတ်မှုစနစ် မှာ အလွန်ကောင်းမွန်ပါတယ်။လက်ရှိ အသုံးပြုသူတွေကတော့ မြန်မာ၊ကင်ညာ နှင်. ဆားဘီးယားနိုင်ငံတို.ဖြစ်ပါတယ်။အမြောက်ရဲ.ပစ်အားဟာ ၃၉ကီလိုမီတာ ထိပစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ စတင်တင်ပို.ခဲ့ပြီ Nora B-52 စနစ်ရဲ.ပထမဆုံး သုံးဆွဲတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။စက်ယာဉ်ပိုင်းမှာတော့ တန်ချိန် ၂၈တန်၊တာဝေးပစ်ခတ်နိုင်စွမ်း ၂၀-၄၁ ကီလိုမီတာ၊မြင်းကောင်ရေအား ၃၆၀၊အမြန်ဆုံးမောင်းနှင်နိုင်စွမ်း ၁ နာရီ ၈၀-၁၀၀ ကီလိုမီတာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by MM at 11:40 PM No comments:
မြန်မာ့ရေတပ်ထုတ် ၇၇၁ အမျိုးအစားကော်ဗတ်တွေဟာ ဒေသတွင်းက ကော်ဗတ်တွေနဲ. ယဉ်နိုင်ပါတယ်။စွမ်းရည် ချင်း၊ထုထည်ချင်း မှာယှဉ်နိုင်မယ့်နိုင်ငံ မရှိပါဘူး။ဒါကြောင်.လည်း နိုင်ငံတကာ သတင်းတွေမှာ ၇၇၁ ကို ဖရီးဂိတ်လို.ခေါ်ကြပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံထုတ် ကော်ဗတ်တွေ ဟာလည်း တန်ချိန် ၆၇၅၊မီတာ ၆၂.၃၊၉.၃၊၂.၈ ဘဲရှိပါတယ် အမြန်နှန်းကတော. ၃၆နှော. (၁နာရီ/၆၇ ကီလိုမီတာ) ဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ မြန်မာက သာပါတယ်။မြန်မာ့ ၇၇၁၊၇၇၂၊၇၇၃ ကော်ဗတ်တွေဟာ တန်ချိန် ၁၂၀၀-၁၃၅၀ ထိရှိပါတယ် လက်နက်စနစ်ကတော့ ၇၆မမ ၁ လက်၊စီ-၈၀၂ (ရေပြင်မှရေပြင်ပစ် ဒုံး) ၄ စင်း၊type-၅၆ ၄ လက်၊ရေငုပ်သဘောင်္တိုက်ဖျက်ရေးဒုံး RBU-1200 (၆ပြောင်းပါ) ၂ ခု တို.ဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံမှာတော. ကော်ဗတ် စစ်သဘောင်္တွေမရှိပါဘူး။မြန်မာ့ စစ်ရေယာဉ် ၇၇၁ တွေကို ဆက်လက် အဆင့်မြင့်တင် ဖို.ဆိုရင် တရုပ် ထုတ် FM-90N(မြေပြင် မှ ဝေဟင်ပစ်)ဒုံးတွေ တပ်ဆင် နိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် ၇၇၁ အုပ်စုဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ ရေတပ်ကို ကောင်းကောင်း တိုက်ဖျက် နိုင်ပါမယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရဲ.တစ်ခုတည်းသော FM-90N ပါ BNS Bangabandhu ကို ဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ပါမယ်။FM-90N ဒုံးဟာ ၇၇၁ မှာတပ်ဆင်သင့်တဲ့ လက်နက်စနစ် ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by MM at 11:13 PM3comments:
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ ရေတပ် နဲ့ ဘင်္ဂင်္လားဒေ့ရေတပ် စစ်သင်္ဘောတွေ နှိုင်းယှဉ်မှုကို သတင်းဌါနတွေမှာ မှားယွင်းစွာ အမြဲဖော်ပြတတ်ကြပါတယ်။ဒီလိုဆို တော့လည်းယှဉ်ကြည့်တာပေါ့လေ...
မြန်မာနိုင်ငံထုတ် စစ်သင်္ဘော ၅၅၆ အမျိုးအစား တွေမှာ C-802 SSM(Surface-to-Surface Missile) တွေတပ်ဆင်ထားပါတယ်။လက်ရှိ မြန်မာရေတပ်မတော် မှာ ၅၅၆ အုပ်စု ၅ စီး အပါအ၀င် ဒုံးကျည်တင် တိုက်ခိုက်ရေး အမြန်ယာဉ် ၁၁ စီး ရှိပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ ရေတပ် မှာ ဖရီးဂိတ် စစ်သင်္ဘော ၅ စီး ရှိ ပါတယ် ဒါပင်မဲ့ စစ်သင်္ဘော ၃ စီးမှာဘဲ ဒုံးကျည်တပ်ဆင် နိုင်ပါ တယ်။ကျန် ၂ စီးမှာတေ့ာ ဖရီးဂိတ် အမည်ခံ ရုံပါဘဲ ဘာစွမ်းရည်မှ မည်မည်ရရ မပါပါဘူး။ဒါ့ပြင့် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ ဖရီးဂိတ် တွေ၊ ကော်ဗတ် တွေ တပ်ဆင် ထုတ် လုပ် နေချိန် ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံ မှာ တော. တရုပ် ရေတပ် စီးမှ အားကိုးတကြီး ၀ယ်ယူနေရ ပါတယ်။၅၅၆ ရေယဉ် အုပ်စု ၁ စု နှင့် တင် ရန်သူ. ဖရီးဂိတ် တွေကို ဖြိုခွင်းနိုင်ပါတယ်။
Posted by MM at 4:32 AM No comments:
Sino Truk Military Trucks
Posted by MM at 12:21 AM No comments:
Posted by MM at 12:16 AM 1 comment:
Destroyer Guangzhou & Frigate Chaohu Visit in Myanmar